Fanokafana ny fankalazana ny faha-60 taonan’ny Fitsarana Tampony
Fitsarana Malagasy: Nitsidika teto Amparibe ny Masoivoho Italiana
Pejy an-tsary androany 21 Jona 2021 : Fananganan-tsaina sy fiarahabana ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana noho ny fetin’ny ray
Ady amin’ny valanaretina Covid-19 Hanao vaksiny ny mpiasa sy fianakaviany eto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana
Raharaham-pitsarana: Zon’ny vahoaka ny mahafantatra ny marina
Fitsarana ara-barotra : Fikaonan-doha hanatsarana sy hanafainganana ny asa
Miroso ny ezaka fanatsarana ny asan’ny fitsarana, izay tafiditra indrindra ao anaty Velirano nataon’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara. Tontosaina androany Alarobia 14 Jolay 2021 etsy amin’ny Motel Anosy ny fikaonan-doha ataon’ny eo anivon’ny Fitsarana ara-barotra. Lohahevitra ny fanatsarana sy fanafainganana ny asa amin’ny ankapobeny.
École Nationale de la Magistrature et des Greffes : Liste des Candidats autorisés à concourir
Published Date: 1 juillet 2021
ARRÊTÉS PORTANT LISTE DES CANDIDATS AUTORISES A CONCOURIR A L’ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE ET DES GREFFES :
ARRÊTÉS LISTE DES CANDIDATS AUTORISES EN FILIÈRE JUDICIAIRE
ARRÊTÉS LISTE DES CANDIDATS AUTORISES EN FILIÈRE ADMINISTRATIVE
ARRÊTÉS LISTE DES CANDIDATS AUTORISES EN FILIÈRE FINANCIÈRE
Fanatsarana ny asam-pitsarana : Miofana 4 andro ireo Mpiraki-draharaha; Fifaninanana hidirana ao amin’ny ENMG : « Aoka tsy hisy hanome vola »
-Fanatsarana ny asam-pitsarana : Miofana 4 andro ireo Mpiraki-draharaha
Milofo amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny asam-pitsarana ny Ministera mpiahy. Anjaran’ireo Lehiben’ny Firaketan-draharaha sy ireo Mpiraki-draharaha no manaraka fiofanana mandritra ny 4 andro, manomboka androany 29 Jona 2021. Atrikasa izay atao etsy amin’ny Sekolim-pirenena ho an’ny Mpitsara sy Mpiraki-draharaha (ENMG) etsy Tsaralalàna. Lohahevitra ny « fifehezana ny fandraisana sy ny serasera ary ny fifandraisana anatiny mba ho fanatsarana ny kalitaon’ny asam-pitsarana».
Miisa eo amin’ny 150 ireo Lehiben’ny Firaketan-draharaha sy ireo Mpiraki-draharaha ary ireo no manaraka izao atrikasa fiofanana andiany voalohany izao, izay karakarain’ny « Direction de la Formation Continue, du e-learning et du partenariat » eo anivon’ny ENMG.
-Fifaninanana hidirana ao amin’ny ENMG : « Aoka tsy hisy hanome vola »
Nandritra ny fanokafana, dia nitondra fanamarihana mikasika ny fihemoran’ny fifaninanana hidirana ao amin’ny ENMG Atoa Tale Jeneralin’ity Sekolim-pirenena ity. Momba ny ady amin’ny kolikoly manokana, dia aoka hoy izy tsy hisy hanaiky hanome vola ny mpifaninana (miisa 3.500 mahery ny antotan-taratasy voaray), ka izay mendrika sy mahay no ho tafiditra. « Manentana koa ny mpiara-miasa aho tsy handray na ariary ary, manamafy aho fa izay tratrako dia hiharan’ny lalàna sy sazy » hoy izy nanohy.
Fanatsarana ny Fandraharahana ny Fonja: Nahazo fitaovana vaovao marobe ny DRAP Atsinanana
Manatsara hatrany. Fandraharahana ny Fonja mivoatra no ezaka eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Nahazo fitaovana vaovao isan-karazany ny eo anivon’ny Talem-paritry ny Fandraharahana ny Fonja (DRAP) Atsinanana. Anisany amin’ireo tanjona ny fitandremana ny fahalemana any am-ponja, ary ny ady amin’ny kolikoly. Marihina fa ny tetikasa PAJMA, avy amin’ny alalan’ny « Agence Française de Développement » (AFD) no mpanohana.